Ihlathi Rust Hack ats Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
ihlathi Rust kugula
Bamba umzuzu kwaye wenze elona xesha lakho ulichithayo udlala iRust - thenga iMveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Khuphisana nabona badlali babalaseleyo behlabathi ekufuneka babonelele ngeRust - thenga iMveliso yeVeki yeVeki e-1 namhlanje!
Ngaba ufuna ukuba lilungu leMidlalo yeVidiyo "iVIP Club"? Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Ulwazi lweRust yeHlathi
I-Rust Forest sisisombululo somntu wonke sokungena kulo naluphi na uhlobo lomdlali weRust. Nokuba uyayithanda i-PvP okanye i-PvE yeRust ayinamsebenzi, kuba kukho izinto ngaphakathi eziza kukunceda ufeze izinto ezinkulu kuyo nayiphi na indlela! Akunyanzelekanga ukuba uchithe iiyure uzama ukuphucula izakhono zakho kunye nokusila izixhobo, njengoko iRust Forest Hack yethu iza kwenza konke oku kube lula. Inani elipheleleyo lokusilela kweRust Hacks ezikhoyo kwi-Intanethi kunzima ukugqitha, kodwa ngombulelo iGamepron iya kuhlala ikugubungele! Yiva amandla eRust Forest namhlanje.
Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe ngaphakathi kwesixhobo seRust Forest, ezinje ngeNtshaba ye-ESP kunye noLwazi (Umgama, izixhobo / i-Item ESP, i-NPC ESP, njl.). Abanye banokuthi iRust Aimbot yethu iyazi kakuhle kuba inezinto eziLungelelanisiweyo / eziGudileyo zoJoliso kunye nokuBekwa phambili kwamathambo, kunye nesangqa esidumileyo seFOV.
I-NPC esp (iingcuka, iibhere, njl.
Izixhobo ze-esp (Ukuphanga, ukubamba, iioyile)
Iinjongo zasimahla (Injongo emanzini)
cwaka uphilise mod
Malunga neRust Forest
Abasebenzisi bathandana ngokupheleleyo neRust Forest Hack, kwaye ngesizathu esihle. Kukho iitoni zeempawu ezimangalisayo onokuthi ucinge ngokuzisebenzisa, uninzi lwazo olunokukunceda kuzo zombini useto lwePvP kunye nePvE. I-NoSpread ilungile xa ufuna ukususa ukusasazeka kweebhulethi, ngelixa iMod Spiderman yethu iya kukuvumela ukuba unamathele ezindongeni kwaye unyuke naphina apho uthanda khona! Ukujolisa okungaginyisi mathe kukunika inkangeleko emsulwa, njengoko abantu bengayi kucinga ukuba uyakopela (unesakhono esimangalisayo), ngelixa isangqa se-FOV siza kukuvumela ukuba ujolise nakubani na okwindawo yakho yokujonga. Iimpawu azipheli!
Kutheni usebenzisa iRust Forest ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli bazokuphoxa ngandlela thile, kwaye abanye babasebenzisi bethu bafundile ngendlela enzima. Ingca ayikho eluhlaza kwelinye icala, kwaye xa sele uzame iRust Forest ngokwakho, awuyi kucinga nokujonga kwenye indawo. Sizinikezele ngokupheleleyo ekuboneleleni abasebenzisi bethu nge
amava amahle, nokuba yeyiphi na iRust Hack abaceba ukuyisebenzisa. Xa ufuna ukwazi ukuba usebenzisa iRust Hack engafumanekiyo (engenayo kwaphela i-malware kunye nezinye izinto ezinobungozi), i-Gamepron yinkampani onokuthembela kuyo. Beka ukholo lwakho kwiRust Forest, sithembe!
Ulawula ikamva lakho kunye nemenyu eyahlukeneyo yomdlalo weRust Forest Hack. Uninzi lweeRust Hacks ozifumanayo kwi-Intanethi ziya kusilela xa kufikwa kwimenyu yabo yomdlalo, njengoko zinkulu kakhulu (ukuthatha indawo kwiscreen sakho) okanye ukufunxa nje ngokubanzi. Sikunika inketho yokwenza amava akho ngokwezifiso ngokupheleleyo, okanye ukuvumela nje izinto kwaye zidlale kuseto oluqhelekileyo. Ihlabathi liyimbatyisi yakho xa ukhetha ukukopela ngeGamepron, ngakumbi kumdlalo wokusinda njengoRust. Fumana izixhobo ezinqabileyo ngokwenza i-Resource ESP kumdlalo!
A1. Lo mphathi uya kufuna ukusetyenziswa kwesixhobo sangaphandle se-USB (ukucoca / ukukhupha). Ayizukusebenza ukuyilayisha kwiidiski zangaphakathi (njenge-C okanye i-D).
A2. Hayi, obu buqhetseba abukho ubungqina bokuhamba, kwaye buya kubonakala kubabukeli.
A6. Ewe, obu buqhetseba buxhasa isikrini esigcweleyo.
Ilindelwe Lawula kunye neRust Forest Hack?